China High Quality Cr1658 Cell Battery Holder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
CR1658 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၊ လီသီယမ်အကြွေစေ့ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ။
Cr1658 ဆဲလ်ဘက်ထရီ Holder ၏ 1. ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
16X58mm ခလုတ်ဆဲလ်အတွက် Thru Hole Mount (THM) & Surface Mount (SMT) ကိုရနိုင်သည်။
ဤကိုင်ဆောင်သူကို UL အဆင့် 94V-0 ပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်နွေ ဦး သံမဏိသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဆက်အသွယ်များသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုများကိုသေချာစေပြီးအဆက်အသွယ်ခုခံမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ သင့်လျော်သောဘက်ထရီထည့်သွင်းမှုသေချာစေရန်အဆက်အသွယ်တစ်ခုစီကို၎င်း၏ polarity ဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်သားထားသည်။
Cr1658 Cell Battery Holder ၏ Product Parameter (Specification)
ထုတ်ကုန်အမည် Cr1658 ဆဲလ်ဘက်ထရီလက်ကိုင်
ပစ္စည်း: Kopa+ Spring stainless steel 302 Gold flash plated
အရွယ်အစား: ၂၉.၃၉*၁၂.၀၇ မီလီမီတာ
၃။ Cr1658 Cell Battery Holder ကိုသုံးသော Product Feature နှင့် Application
၁။ ဤ CR1658 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည်သိပ်သည်းဆမြင့်မားသောထုပ်ပိုးမှုအတွက် profile နိမ့်သည်။
၆။ အခြေခံပစ္စည်း UL သည်စက်မှုအရည်ပျော်မှုအများစုနှင့်မယှဉ်နိုင်ပါ။
Cr1658 Cell Battery Holder ၏ 4. Product Details
အခြေခံ: Kopa 66.30% Glass ပြည့်၊ မီးခိုးရောင်
အဆက်အသွယ်များ၊ ၃၀၂ ဒေါသသံမဏိသံမဏိရွှေရောင်မီးထိုးထားသော။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: CR1658 ဆဲလ်ဘက်ထရီပိုင်ရှင်
Cr1658 Cell Battery Holder ၏ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း ၅
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Cr1658 Cell Battery Holder အားလုံး
Cr1658 Cell Battery Holder ကိုထုပ်ပိုး။ တင်ပို့ခြင်း
Cr1658 Cell Battery Holder ၏ 7. FAQ
ပုံမှန် CR1658 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူအမျိုးအစားများနမူနာများကိုသင်အခမဲ့နမူနာရယူနိုင်ပြီးကုန်တင်ခအတွက်သာပေးချေပါ။
hot Tags:: Cr1658 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ အစုလိုက်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်၊ တရုတ်၊ Made in China၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ လျှော့စျေး၊ အနိမ့်ဈေး CE၊ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်